छोराछोरीकाे सहारा नपाएकि अामाकाे सडकमा कुकुरकाे सहारा यस्तो! नपत्याए भिडियोमै हेर्नुहाेस – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > छोराछोरीकाे सहारा नपाएकि अामाकाे सडकमा कुकुरकाे सहारा यस्तो! नपत्याए भिडियोमै हेर्नुहाेस
छोराछोरीकाे सहारा नपाएकि अामाकाे सडकमा कुकुरकाे सहारा यस्तो! नपत्याए भिडियोमै हेर्नुहाेस
admin September 27, 2018 जीवनशैली, भिडियो 0
निम्न आर्थिक अवस्थाकी यी बृद्धाका २०४४ सालमा श्रीमान बिते । भएको एउटा सन्तानले पनि संस्कार बिर्सियो । उत्तराधिकारी छोरा नै होस् भनेर तीर्थ–व्रत गर्ने हाम्रो संस्कारलाई उनको छोराले उल्टाइदियो, दिनुसम्मको दुःख दिएर । आखिर कमजोर शरीरले माइतीको आस गर्यो तर माइतीघर यति बिरानो बन्यो कि उनको घाउमा मलम होइन, नुन् छर्किदियो । अन्ततः अन्जानमै उनले काठमाडौं शहर रोजिन् ।
आखिर आमाको मन न हो काठमाडौं आएपछि पनि छोराको यादले सतायो, मातृत्व जाग्यो । एउटै मात्र सन्तान छोराको हालखबर बुझ्न मन लाग्यो । चिनेजानेकाबाट छोराको खोजी गरिन् । काठमाडौंकै असनमा छोरा फेला पनि पर्यो ।
तर छोरा अझै छोरा बनेन । छोरालाई कर्तब्यबोध सम्म हुन सकेन, जन्मदिने आमा हुन् भन्ने हेक्कासम्म बाँकी रहेन । उनी फर्किन्, आफ्नै संसार वसन्तपुर दरबार स्क्वार, जहाँ आफ्नो भन्नु त्यही एउटा कालो कुकुर छ, सहारा दयालु बटुवा । दैनिकी उस्तैगरी बितिरहेको छ, दिनभरी माग्नु अनि दिन ढलेसंगै सम्झनाले मन रुझाउँदै उज्यालो पर्खनु । एवम् रीतले …
बृद्धभत्ता लुट्न गएका नातिले ९० बर्षिया बृद्ध हजुरअामालार्इ यसरी निर्घात कुटेपछि…
कार्टुनमा भेटिएकि बच्चा र आमालाई न्वारनको दिन राशनदेखि भालेसम्म उपहार (भिडियो सहित)